« Mino Anao…Tiako Ianao » : Hanolotra hira fiderana mandritra ny ora telo ny Antsan’i Kristy
Taona vitsivitsy tsy tazana. Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Antsan’i Kristy, ary hanolotra hira fiderana mandritra ny ora telo etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny alahady 10 septambra izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. « Mino …Tohiny
Solika tsy voadio : Manana ny ho avy eo amin’ny fitrandrahana i Madagasikara
Maro amin’ireo kaompania vahiny mpitrandraka solika no ao anatin’ny dingan’ny fandihadiana mba haminavinana ny tahirin-tsolika misy amin’izao fotoana. Tafiditra amin’izany koa ny fanadihadiana ny tahan’ny solika azo trandrahina sy ny fijerena ny tombony mety ho …Tohiny
Minisitra Harry Laurent Rahajason : “Tsy handray mpitsoa-ponenana mihitsy i Madagasikara”
Niteraka ary nampiteraka resabe ny lohateny lehibe tamina gazety iray mpiseho isan’andro mahakasika ny fandraisan’i Madagasikara mpitsoa-ponenana avy any Syrie eny Ambohimangakely, Lalam-pirenena faharoa (RN2). Tao no niahiahy, ary tao koa ireo raiki-tahotra amin’ny mety …Tohiny
Fandraisana mpitsoa-ponenana sirianina : Tsaho sy lainga no aely
Misy ankehitriny ny fanaparitahana vaovao tsy marina sy fampihorohoroana saim-bahoaka izay ataon’ireo izay minia te hanakorontana ny fiainam-pirenena amin’ny alalan’ ny famoizana tsaho, fomba fanaon’ireo mpanao politika miray tendro amin’ny alalan’ny mpiasan’ny serasera izay miara- …Tohiny